ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »3စာမေးပွဲကာလအတွင်းချိန်းတွေ့ဖို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 26 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဒါဟာနောက်တဖန်အနှစ်တစ်နှစ်ကအချိန်င်. စာမေးပွဲကာလသည်သင့်အပေါ်မှာတက် snuck ခဲ့ပြီးပြီးသားသင့်တည်ရှိမှု၏ bane ဖြစ်လာသည်. မရေမတွက်နိုင်သောအလုံးစုံ nighters, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် CRAM နာရီပတ်လုံးအကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်သင့်အသက်တာ၏ပါဝင်သည်ကားအဘယ်သို့. ငါသည်အထားပြီးပရိဝုဏ်ပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်သွားပါပြီငါဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာပျက်ခဲ့လိုခံစားမိပါတယ်- ကအိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကော်ဖီနှင့်သကြားလုံးတစ်ခုအလွန်အကျွံ၏မရှိခြင်းပျမ်းမျှကျောင်းသားဘာလုပ်တယ်င်.
စာမေးပွဲဖြေဆိုကာလ၏နောက်ထပ်ရလဒ်ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ချိန်ချိန်အလေးပေးကိုအနီးကပ်ဆုံးလူများအပေါ်မှာထဲကယူရခြင်းဖြစ်သည်. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ဘဝအတွက်သတင်းကောင်းမဟုတ်ပါ. သင်တို့သည်နောက်လူမှုရေးဘဝရှိသည်ကဲ့သို့သင်တို့ဖြစ်နိုင်ခံစားရနှင့်သင့်ဂိမ်းခွေကိုယိုစီးဆင်းကြောင်း. သင်သေးသဘောပေါက်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်တို့ထံသို့အကြောင်းင်.
ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်စိတ်မပူရန်မလိုအပ်ပါဘူး. ဤ3အကြံပြုချက်များကိုသင့်ချိန်းတွေ့အသက်တာတွင်အမြင့်မားအမှတ်အသားကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ်သင့်ရဲ့စာမေးပွဲစစ် Ace ကိုကူညီနိုင်.
စာမေးပွဲကာလအတွင်းသင့်ကျောင်းပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အရေးပါသောအချိန်ဖြစ်, ဒါကြောင့်ရက်စွဲများပေါ်မှာအအေးထက်မြက်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်မည်အကြောင်း. သင်သည်သင်၏စာမေးပွဲတွင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုချင်တယ်ကတည်းက, သင်မှုကြောင့်ရက်စွဲများ၏စုံတွဲတစ်တွဲမှတန်ဖိုးရှိသောလေ့လာမှုအချိန်ပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင့်အန္တာရာယ်မှလက်မခံချင်ကြဘူး. သင်၌နက်ရှိုင်းသိပ္ပံနည်းကျဖော်မြူလာနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာသင်ယူနေစဉ်, ကိုယာယီသင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုဆင်းဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသင်နှင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မည်.
Red Bull, ရေခဲမုန့်, ချစ်ပ်များနှင့်ကော်ဖီစာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်အတွင်းအရေးပါမှုအဆင့်မြင့်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရန်ပုံရသည်. သို့သော်, ကချိန်းတွေ့ဖို့ကြွလာသောအခါသူတို့အထောက်အကူဖြစ်စေရန်သက်သေပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါကြောင့်ဟန်ချက်အသစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်၏. သင်တို့ရှိသမျှသည်နေ့ရက်သည်ကိုလေ့လာလျှင်၎င်းသည်သင့်အားသင်မည်သည့်ကောင်းသောအကျင့်မည်မဟုတ်, ညဉ့်လုံး, နေရောင်ကိုမမြင်ရမဆိုအားလပ်ချိန်ယူကြဘူး. လေ့လာနေနှင့်အားလပ်ချိန်အကြားတစ်ဦးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဟန်ချက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့လေ့လာနေစွမ်းရည်နှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့သက်သေပြချက်ခဲ့သည်.
unwind ဖို့အချိန်၌လျောက်ပတ်, စိတ်ဖိစီးမှု, နှင့်အချို့သောနေရောင်ခြည်အတွက်လှုံသော့ချက်. ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုအားလပ်ချိန်ကိုသင့်ချစ်ရသူနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့စံပြအခွင့်အလမ်းများဖြစ်လာ. တိုင်းမကြာခဏသို့မဟုတ်အတူတူတီဗီရှိုး watch ရုပ်ရှင်တညဉ့်ရှိခြင်းကိုစဉ်းစားပါ.
တနည်းအားဖြင့်, ပြင်ပလာပြီးတက်ကြွစွာဖြစ်ခြင်းကောင်းတစ်ဦး Bond လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်, အဖြစ်သင့်ခြုံငုံကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး- သင့်အစားအစာထဲမှာသကြားဓာတ်နှင့်ကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်ပါသည်အဖြစ်မမြင်ဘဲ. အဆင့်မြင့်ပညာရေးအသက်တာ၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ပတ်သက်. cramming session များနှင့် rant အကြားရေတိုလူတန်းစားပေါင်းစုံသွား. လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သင့်ဦးနှောက်ကိုစောင့်ရှောက်မည်.
Skype ကိုကျော်၎င်း၏တိုတောင်းသောသက်တမ်းချက်တင်စကားပြောဆိုမှုပဲဖြစ်ဖြစ်, ့သူတို့စကားသံကိုကြားရန်ဖုန်းပေါ်မှာ chatting လုပ်နေကြတယ်, နှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့်အခါ cuddle အစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်း-over, သင်သည်အလုပ်နှင့်ပြဇာတ်အကြားချိန်ခွင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သေချာအောင်.
ဒီတစ်ဦး၏လှပသော Self-ရှင်းလင်း. သင့်ရဲ့စာမေးပွဲစစ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြသည်တစ်ချိန်ကအောင်ပွဲခံဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်! သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုသင့်ရဲ့စာမေးပွဲဖြေလျှင်အဖျားခတ်၏အောင်ပွဲဆင်နွဲဖို့လုပ်နိုင်နှင့်သင့် connection rekindle ရန်ပျော်စရာတစ်ခုခုစီစဉ်ထားပါ. အကယ်. စိတ်အားထက်သန် Beaver အဘိဓါန်င်နှင့် ကြိုတင်. အရာတစ်ခုခုစီစဉ်ထားလျှင်သင်တို့ထံသို့မျှော်လင့်တစ်ခုခုပေးမည်.
ဤ3အကြံပေးချက်များကိုသင် hectic စာမေးပွဲဖြေဆိုစဉ်ကာလအတွင်းသင်၏မေတ္တာအသက်တာ၌မီးထအောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့မရေမတွက်နိုင်သောသင်တန်းများနှင့်အတူအသိပညာဤရယူလေ့လာခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏စာမေးပွဲကိုကျော်အောင်မြင်ပါစေအဖြစ်သင့်ချိန်းတွေ့ဘဝနိုင်လိမ့်မယ်.
အဘယ်အရာကိုသင်အမှန်တကယ်သိရန်လို: Chivalry ဘုရင်ဖြစ်